AMD Zen 2 inouya kuKymera Slimbook | Linux Vakapindwa muropa
AMD iri kukura muhuwandu hwekutengesa kubva payakatanga microprocessors zvichienderana neZen microarchitecture mushure mekundikana kwenguva yeFusion. Intel nematambudziko ayo ne10nm yekugadzira tekinoroji uye kushomeka kuri kubatsirawo mukukwira kwe AMD. Kwenguva yekutanga munguva yakareba, Intel yakaonekwa paComputex 2019 ichiedza kugadzirisa mabhenji ayo kusvika pakakwirira kutya AMD ...
AMD inokwikwidza neiyo microarchitecture ine hukuru hwekuvandudza mukuita uye kugona, asi nemitengo yakaderera zvakanyanya kana ichienzaniswa neIntel. Muchokwadi, iyi Chikunguru AMD yakatengesa kunze Intel, ichiwana chikamu chemusika che 50.5% muCCN chinzvimbo uye Intel inowira ku49.5% share, chimwe chinhu chisina kujairika tichifunga kuti yakagara iine zvikamu pamusoro pe70%. Iwe hauna kuona iwo akanaka manhamba kubva K7 uye K8 ye AMD.
Uye hazvisi izvo zvese, mushure meZen neZen + Zvino kunouya Chizvarwa chechitatu cheZen, ndiko kuti, Zen 3, nekuvandudza kukuru. Zvikwata zviri kutotanga kuzviunganidza, saka zvinotarisirwa kuti mwaka uno wezhizha kutengesa kweADD kucharamba kuchiwedzera nezvipisi zvitsva izvi. Zvakanaka, kana iwe uchida Linux PC neiyi microarchitecture, iwe unofanirwa kuziva kuti iwe unogona kuiwana munguva pfupi yezvikwata zvine AMD Ryzen yeiyo 3xxx yakateedzana.
VaSpanish Slimbook iri kutanga kuvaka machipisi mumakomputa ayo eSlimbook Kymera. Iwe uchangovawana ivo pawebhusaiti yeiyo Valencian firm. Naizvozvo, kana iwe uri kufunga nezve kukwidziridza komputa yako, uno mukana wakanaka wekuchinjira kune zvine simba Hardware neako aunofarira GNU / Linux kugovera yakaiswa pairi. Zvakare, rangarira izvo iwo zvikwata zvemhando yepamusoro uye nemitengo inonzwisisika.
Mamwe mashoko - Slimbook Chitoro
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » AMD Zen 2 inouya kuKymera Slimbook